Ukukhubazeka kukaMicrosoft Scholarship 2021/2022 Ukuhlaziywa kwePortal yesicelo: Iindaba zeSikolo sangoku
Ukukhubazeka kweMicrosoft Scholarship: Le nkxaso mali yokufunda yenzelwe ukunceda abo bakhubazekileyo. Ke, ukuba unayo nayiphi na indlela yokukhubazeka kuya kufuneka uyithathele ingqalelo le nkcukacha. Funda eli nqaku ukuze ufunde ngakumbi ngale nto yokufunda iMicrosoft yokukhubazeka. Ndithembe, uya konwaba xa usenzile.
Iinjongo zeMicrosoft Scholarship yokuKhubazeka
The IMicrosoft yokufunda ukukhubazeka ihambisa omnye wemishini yeMicrosoft. Kwaye le mishini kukudala iqela labasebenzi abanokukhubazeka. Kwaye eli qela kukuxhobisa nokwenza abantu abakhubazekileyo.
Ngapha koko, le mfundo iyenza isikolo esiphakamileyo abafundi abakhubazekileyo ukuba baye ekholejini kwaye bajolise kwikhondo lomsebenzi kwishishini lobuchwephesha.
Ukongeza, inethemba lokufaka isandla ekwandiseni iqula labantu abaphila nokukhubazeka ababhalisa kwimfundo ephakamileyo. Kwakhona, kwaye, ekuhambeni kwexesha, ukunciphisa yokungasebenzi umkhethe kolu luhlu lwabantu.
Ngubani ofanelekileyo ukuba afake isicelo sale Scholarship?
Isibonelelo sokukhubazeka iMicrosoft siya kunikezelwa kubantu abadala abathembisayo kwizikolo eziphakamileyo. Nangona kunjalo, kufuneka bacwangcise ukuya kwiikholeji yokufundela okanye yokufunda. Kwakhona, kufuneka ube nesidingo semali.
IMicrosoft Disability Scholarship Worth / Isibonelelo
Isixa soku kuhlaziywa scholarship Ukunikezelwa yi- $ 5,000 ngonyaka. Nangona kunjalo, ifikelela kwi- $ 20,000 iyonke.
Le mali ihlawulwe ngeSiseko seSeattle. Kwaye kungenxa yeQela labaNcedo labaSebenzi abakhubazekileyo (ERG) eMicrosoft. Oku kwenziwa kwi-Ofisi yoNcedo lwezeMali yesikolo.
Iimfuneko zeMicrosoft Disability Scholarship
Ukuqwalaselwa kwiMicrosoft Scholarship yokukhubazeka, kuya kufuneka:
Yiba ngumfundi ophakamileyo wamabanga aphakamileyo okhubazekileyo. Nangona kunjalo, oku njengoko kuchaziwe ngu NGANI. Nangona kunjalo, ukukhubazeka kukubonwa, ukuva, ukuhamba, ukuqonda, intetho okanye okunye ukukhubazeka.
Cwangcisa kwakhona ukuya kwiprogram yesidanga sokuqala. Kwaye oku kuku-2 okanye i-4 yeminyaka yeDyunivesithi / iKholeji okanye iKholeji yobuGcisa. Kwakhona, oku kufanele ukuba kube ekwindla konyaka wokufunda emva kokuphumelela kwisikolo esiphakamileyo.
Ngapha koko, isicelo esenziweyo kufuneka sibe se-USA. Okanye ube ne-USA-Affiliate yokuthengiselana kwemali. Nangona kunjalo, ngeenkcukacha, unokuqhagamshelana neSeattle Foundation ukuze uqinisekise ukufaneleka kwesikolo esingekho e-USA.
Ukongeza, bhengeza into ephambili evunyiweyo kubunjineli, kwisayensi yekhompyuter kunye neenkqubo zolwazi lwekhompyuter. Kwakhona, emthethweni, kwishishini, okanye kumhlaba onxulumene noko. Umzekelo, umthetho, umthetho wangaphambili, ezemali, ulawulo lweshishini, okanye ukuthengisa.
Kwakhona bonisa ukuthanda itekhnoloji.
Ngaphaya koko, bonisa ubunkokeli esikolweni kunye / okanye ekuhlaleni.
Kwakhona, yiba ne-GPA yesikolo esiphakamileyo ye-3.0 okanye ngaphezulu.
Ukongeza, funa uncedo lwezezimali ukuya kwiikholeji.
Imeko yobhaliso kufuneka ibe sisigxina okanye isiqingatha sexesha.
Inkqubo yokufaka isicelo sale Scholarship
Ukufaka isicelo sokukhubazeka kweMicrosoft scholarship, Phawula. Thumela ezi zinto zilandelayo kwi-imeyile [imeyile ikhuselwe]:
isishwankatheloIsifuba sakho kufuneka sibandakanye olu lwazi lulandelayo: Izinto ezenziwa emva kweeyure zokufunda. Kwakhona iimbasa kunye namabhaso owafumeneyo. Nangona kunjalo, ukuba kunokwenzeka, faka amabhaso anxulumene netekhnoloji. Kwaye namava omsebenzi
yombhalo: Faka ikopi engekho mthethweni yombhalo wakho wangoku wezifundo. Kwakhona, ukuba ukhethwe njengowokugqibela, qaphela. Umfaki-sicelo kuya kufuneka anike iSeattle Foundation iinguqulelo ezisemthethweni.
Izincoko ezintathu: Nceda undwendwele ikhonkco lokufunda ukuze ufunde okungakumbi malunga nezincoko ezintathu (3).
Iileta ezimbini zeNgcebiso: Ubuncinci ileta enye kufuneka isuke kwi-faculty okanye kumqeshwa esikolweni sakho. Iileta zengcebiso mazibe zezentsusa kwaye akufuneki ziphindaphindwe zeeleta zokucebisa zekholeji. Sukuzibandakanya izihlobo njengezalathiso.
Gcwalisa ifom yesicelo: Ukongeza, gcwalisa iFom yesicelo yonke esiphelweni seli phepha. Kwakhona, unokuchwetheza ulwazi okanye uprinte ngokucacileyo. Nangona kunjalo, unako Khuphela usetyenziso lweMicrosoft lokufunda ngokukhubazeka APHA.
Kubalulekile ukuba uyikhumbule le nto. Nceda thumela imeyile konke oku kungasentla ku [imeyile ikhuselwe]. Kwakhona, nceda uqinisekise ukuba ipakethi yesicelo sakho ibandakanya lonke ulwazi olufunekayo kunye namaxwebhu ngaphambi kokuthumela.
UMicrosoft akasayi kwamkela amaxwebhu ongezelelweyo athunyelwe ngokwahlukeneyo kwipakethe yesicelo sentsusa. Kwakhona, ziipakethi zesicelo esipheleleyo kuphela eziya kuthi zijongwe. Nangona kunjalo, abo bakhethelwe ukufumana iMicrosoft Scholarship yokukhubazeka baya kwaziswa ekupheleni kuka-Epreli.
Iwebsite yeScholarship: SEBENZA LAPHO
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neMicrosoft Scholarship
Apha ngezantsi kukho imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nale mfundo:
1. Ngaba kufuneka ndibengummi wase-US ukuze ndifake isicelo?
Hayi. Bonke abafundi bezikolo eziphakamileyo abaphila nokukhubazeka abaneentswelo zemali bayakhuthazwa ukuba bafake izicelo.
2. Ngaba kufuneka ndiye eSikolweni (kwiKholeji / kwiDyunivesithi, njlnjl) eMelika?
Akunjalo. Nangona kunjalo, kufuneka uye kwisikolo nokuba sise-USA, okanye isikolo ofunda kuso kufuneka sibe nomanyano lwe-US lwentengiselwano yezemali. Kwakhona, ungaqhagamshelana [imeyile ikhuselwe] Ukuqinisekisa ukufaneleka kwezikolo ezingezozase-USA.
3. Ndingaya kwiKholeji yasekuHlaleni?
Ewe. Logama nje inkqubo yakho yesidanga sokuqala ihlangabezana neemfuno zokufaneleka.
4. Ngaba ndingenza iposi kuFaka isicelo sam kunye namaxwebhu axhasayo?
Uku: Ukufundiswa kweeScholarships
I-1601 yesihlanu Ave, Suite 1900
5. Ngaba le Scholarship iyahlaziywa?
Ewe. Kwakhona, abo bafumana amabhaso baya kufumana i- $ 5,000 ngonyaka wesikolo. Ukuya kuthi ga kwi-20,000, XNUMX ibhaso lilonke.
6. Ngaba kukho uQeqesho okanye enye iNkqubo yeMicrosoft yeMicimbi enxulunyaniswa nale Scholarship ivuselelweyo?
Hayi ngeli xesha. Nangona kunjalo, njengoko iNgxowa-mali ikhula, uMicrosoft unelungelo lokwenza ezi nkqubo.
Ezi zilapha ngasentla lolunye ulwazi olubalulekileyo ekufuneka unalo malunga noku scholarship. Nangona kunjalo, uya kuvuma nam elo lithuba elinqabileyo, nangona kusekho iimfuno abafaki zicelo ekufuneka behlangane nazo.
Zive ukhululekile ukufaka isicelo. Kwakhona, yenza oko ngoku ukuma ithuba ngokuchasene nomhla obekiweyo. Nangona kunjalo, uhlaziyo oluthe kratya, nceda undwendwele iwebhusayithi yokufunda. Kwakhona, ungandwendwela eli phepha lewebhu.
INkqubo yeGrant PhD Student Student Programme 2017-Netherlands
I-AVID Ukuqeshwa kwabasebenzi kwi-2020/2021 Ifom yesicelo seFortal
Udliwanondlebe noMibuzo woDliwanondlebe kunye neempendulo 2021
UkuSinda kweZiko kunye neQhinga lokuKhula kwiNdawo yoShishino yoKhuphiswano
Intlawulo yokwamkelwa kwesidanga sokuqala se-BSUM 2018-Inkqubo yokuHlawula
Imisebenzi ePort Harcourt e-Energi Talent Resourcing-nge-6 kaSeptemba 2016
« Ulwabiwo-mali oluphezulu kakhulu lwe-2021 lwaBafundi beZizwe ngeFom Portal
IJAMB CBT App 2021 Jonga indlela yokukhuphela iiKhokelo zaSimahla kunye nokuziQhelanisa »